Usenamabhizinisi ehlukene okhule ethanda impilo ewubukhazikhazi nosekumenze wakwazi ukushintsha impilo yakubo. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Namuhla selifezekile iphupho likaMnu uSiyabonga Khumalo, isikhulu esiphezulu se-Isinamuva Holdings. Lena yinkampani enezinkampani ezithathu, Isinamuva Properties, Isinamuva Entertainment ne-Isinamuva Manufacturing.
Ngaphansi kweSinamuva Properties bathenga umhlaba bese bakha izindlu noma yisiphi esinye isakhiwo umuntu asuke esifuna. Isinamuva Entertainment ihlela imicimbi, iphathe nabaculi. Isinamuva Manufacturing ikhiqiza osofa nemibhede kukanokusho ngaphansi kweBruce Luxury Interior.
Osofa bakanokusho be-Isinamuva Manufacturing
UKhumalo, oneminyaka engu-33, waseNsimbini, Esikhawini, eNyakatho yeKwaZulu-Natali, uthi ngemva kokuphothula umatikuletsheni, wacela kunina ukuya eGoli ngoba ekholwa wukuthi yilapho iphupho lakhe lingafezeka khona.
Wafika khona wabamba amatoho afana nokulungisa izingadi zabantu nokuwasha izimoto. Wagcina esebenza endaweni yokucwala izinwele, nokwamnika indawo yokukhangisa ngekhono lokufaka ama-tile ayelifunde kubo.
Leso sikhangiso samtholela umsebenzi owenza akwazi ukuqongolela imali wakwazi ukuyofundela ukusebenza e-call centre, wathola umsebenzi kwaVodacom.
Nakuba aba nesibindi sokuya kwesinye isifundazwe lapho ayengazi muntu khona kodwa uthi kukhona ukuzisola aba nakho kancane. Muzwe echaza.
Intshisekelo yokuzisebenza yaqala ngenkathi ezwa ngebhizinisi le-network marketing i-IFA, nokuyithuba agxuma wahlala kulo. Eqala ukulizama, lamhlula, nokwaphoqa ukuthi aphindele kubo avume ukuthi “iGoli lingehlule”.
Nokho ukungaphosi ithawula kalula nokubambelela ephusheni lakhe lempilo ewubukhazikhazi kwamenza waphindela eGoli. Waqala phansi ebhizinisini le-IFA kanti ucilo uzozishaya endukwini kulokhu. Impumelelo yalo yiyona ezale lamabhizinisi akhona manje.
“Ngathi ngiqala nje, ngahola uR6 000 futhi ngase ngikade ngagcina ukuphatha imali ngaleso sikhathi. Ngakhula, ngaze ngagcina sengiyi-presenter, ngisho nemidlalo yeNdebe yoMhlaba ngo-2010 ngayibuka mahhala ngenxa yalo leli bhizinisi futhi ngagibela nebhanoyi okokuqala. Ngasebenzisana nomama sakha umuzi wokuqala owakhiwe ngama-blocks ekhaya ngoba yonke eminye ngaphambi kwalona kwakungeyamatshe. Kwaze kwaba negama nje ekhaya kuthiwa yisemafukwini, siyinhlekisa emphakathini,” kukhumbula yena.
Uthi kukhona abantu ayesebenza nabo kwa-IFA abamkhuthaza ukuthi akabheke namanye amathuba kube khona enye indlela ezomngenisela imali. Yiloko okwamenza wabhalisa Isinamuva Holdings ngo-2015.
Odedangendlale bemibhede ye-Isinamuva Manufacturing
Namhlanje le nkampani iqashe abantu abawu-28 ngokugcwele. Kumanje imatasa nokwakha i-estate ePort Dunford ngaseRichards Bay, lapho kuzoba nezindlu ezizothengwa nezizoqashisa. Abazozidayisa zizoqala kuR560 000 kuya phezulu, kuthi abazoziqashisa irenti iqale kuR8 000 kuya phezulu.
Isinamuva Entertainment isike yahlela imicimbi efana ne-Fun Explosion. UKhumalo uthe ukuba wusomabhizinisi kumfundise ukungadikibali nokuqonda ukuthi ungavumeli ukuphazanyiswa ngabantu embonweni wakho. Muzwe echaza ngaziqhenya ngakho.
Ekhuluma ngezinselelo aseke wabhekana nazo, uKhumalo uthi ibhizinisi like likuphunyuke kade uthi izinto zihamba kahle, kuvele kuse sekungokunye.
“Kumqoka nokuhlukanisa imali yebhizinisi neyakho ukuze uzoba nemali (ehlale) igade umsebenzi. Kumqoka nokuwuhlonipha umsebenzi. Kokunye uke uqale ibhizinisi nomuntu umthemba, avele akushiye ulenga. Ungatshali noma uthembele entweni eyodwa,” kweluleka yena.
UKhumalo, onengoduso nabantwana abane, ukhuthaze intsha ukuthi ingapheli amandla ngenxa yemuva layo namaphutha ewenze isakhula. “Zama ukuhamba nabantu abaya lapho ofisa ukuya khona. Zihluphe ngokufuna ulwazi njengaku-Google. Volontiya mhlawumbe kumuntu wangakini ofaka amawindi e-aluminium ukuze ufunde ikhono elisha ongagcina usuziphilisa ngalo. Qala kancane, mhlawumbe uthenge inhloko uyidayise ugcine usukhula kusukela lapho.
“Ningawabukeli phansi amabhizinisi e-network marketing. Maningi, njengo-AMC, iForever Living… Akusizi ukuzitshela nokucabanga ukuthi le nto inzima. Ukuzikhandla yinto engasekho entsheni yanamhlanje. Lolu hlobo lwamabhizinisi olwayo yonke inhlobo yomuntu futhi akunamona laphaya,” kusho uKhuluma.
Uthi uma ebuka umsebenzi wabo wezakhiwo unesifiso sokuba “neDubai yalapha eNingizimu Afrika”.
Ngale kwamabhizinisi, uKhumalo unenhlangano enikela emphakathini iBruce Foundation. Okwamanje umsebenzi egxile kuwona ngowokunikela ngezincwadi ngaphansi kohlelo iRead-A-Book.